Sanduuqa Maaliyadeed ee McKnight ee Neuroscience wuxuu taageeraa cilmi-baaris cusub oo loogu talagalay in saynis loo soo dhowaado maalinta cudurrada maskaxda si sax ah loo ogaan karo, looga hortagi karo, loona daweyn karo. Si taas loo gaaro, Abaal marinta McKnight Neurobiology of Brain Disorders Award (oo ah Abaal Marinta xusuusta iyo Xanuunada Maskaxda) waxay caawiyaan saynisyahano ka shaqeynaya sidii loo dabaqi lahaa aqoonta lagu gaadhay cilmi baaris asaasi ah oo ku saabsan ciladaha maskaxda maskaxda.
Baarayaasha baaritaanka ka sameeya machadyada ku yaal Mareykanka waxaa lagu casuumay inay codsadaan. Baarayaasha waa inay kujiraan balan waqti-buuxa ah heerka darajada, kaaliyaha, ama borofishanka. Cinwaanada ay ka midka yihiin Kaaliyaha Cilmi-baarista ee cilmi-baarista, Kuxigeenka Kaaliyaha Professor, Kaaliyaha Professor Cilmi-baarista Raadinta, Booqashada Booqashada ama Macallinku ma mudna. Baarayaasha cilmi-baarisyada ka hawlgala sida kuwa ka shaqeeya Machadka Allen, Machadyada Qaranka ee Caafimaadka, Howard Hughes Medical Institute iyo machadyo la mid ah ayaan u qalmin. Codsadayaashu waxaa laga yaabaa inaysan qaban abaalmarin kale oo loo yaqaan 'McKnight Award' taas oo kuxiran doonta Abaalmarinta Neurobiology of Brain Disorders Award. Waxaan danaynaynaa juqraafi ahaan, jinsi ahaan, iyo kala duwanaanshaha isirka, waxaanan ku dhiirigelineynaa haweenka iyo bulshooyinka midabka leh inay dalbadaan. Miisaaniyada waxaa loo isticmaali karaa howlo kala duwan oo cilmi baaris ah, laakiin looma adeegsan karo mushaarka qofka qaata. Meelaha kale ee taageerada ee musharraxiinta waxaa loo qaddarin doonaa marka la dooranayo abaalmarinnada.
Waxaa jira nidaam xulasho laba marxaladood ah, oo ka bilaabma warqad ujeedo ah (LOI). Guddiga xulashada ayaa eegi doona LOIs waxayna ku casuumi doonaan tiro codsadayaal ah inay soo bandhigaan talo soo jeedin buuxda. Illaa afar abaalmarino ayaa la sameeyaa sanad walba, oo mid kastaaba bixinayo $100,000 sanadkiiba saddex sano. LOI waxay ku egtahay Maarso 2, 2020 (saq dhexe ee aagagagii ugu dambeeyay dhulka). Soo-jeedinta buuxda waxay noqon doontaa bisha Sebtember 7, 2020. Maalgalintu waxay bilaabmaysaa Febraayo 1, 2021.
Habka dalbashada gebi ahaanba waa khadka tooska ah. Riix halkan si aad uhesho Foomka 'LOI Level LOI'. Hal baaraha (xiriiriyaha koowaad ee soojeedinta) ayaa looga baahan doonaa inuu dejiyo magaca adeegsadaha iyo erayga sirta ah (fadlan hayso magacaaga isticmaale iyo ereygaaga sirta ah sidaad ugu baahan doontid hawsha)); kadib buuxi waraaqda wejiga tooska ah oo ku shub sharax mashruuc laba bog ah oo aan ka badnayn laba bog oo tixraac ah; sawirro kasta waa inay ahaadaan xadka laba-bog ah. Fadlan hal-meel bannaan fogaan ah 12-qodob fogaannada iyadoo la adeegsanayo dhumucyo hal-inji ah. Dhammaan codsadeyaashu waa inay u habeeyaan boggaga PDF-ga sida soo socota:
Mawduuca: Sanduuqa McKnight Fund for Neuroscience, Abaalmarinta Maqalka & Cognitive Disorder, Abaalmarinta Neurobiology ee Abaalmarinta Maskaxda
Abaalmarinta Teknolojiyadda McKnight 2020